Jordan Henderson Oo Daboolka Ka Qaaday Muddada Uu Usii Ciyaari Doono Liverpool - Gool24.Net
Jordan Henderson Oo Daboolka Ka Qaaday Muddada Uu Usii Ciyaari Doono Liverpool
Jordan Henderson ayaa ku dooday inuu dareemayo ‘sidii ay da’diisu tahay 25 jir’ jidh ahaan, isla markaana uu garoomada kusii jiri doono lix illaa toddoba sannadood oo kale oo uu usii ciyaari doono Liverpool.
Kabtan Jordan Henderson ayaa Liverpool kusoo biiray sannadkii 2011 iyadoo ay da’diisu ahayd 20 jir, waxaanay £20 milyan oo Gini kaga soo iibsatay Southampton.
Sannadkii 2015kii ayuu Steven Gerrard kusii wareejiyey calaamadda kabtannimada, waxaana uu nasiib u yeeshay inuu labadii sannadood ee ugu dambeeyey la qaado Champions League iyo Premier League.
Henderson oo warbaahinta la hadlayay ayaa la weydiiyey muddada uu garoomada kusii jiri karayo, waxaanu yidhi: “Hadda ayuun baan 30 jir noqday, walina waxaan dareemayaa inaan 25 jir ahay jidh ahaan, sidoo kalena waxa aan u fiicanahay sidii aan awal horeba ahaa. Xirfaddaydu heerkii ugu fiicnaa ayay joogtaa marka laga eego khibradda, jidh ahaaanna su’aali kamay taagnayn.
“Waxa aan doonayaa inaan isku dayo inaan sii ciyaaro waqtiga ugu dheer ee suurtogalka ah. Wali waan jecelahay ciyaaraha, waxaan doonayaa inaan u ciyaaro England iyo Liverpool waqtiga ugu dheer ee aan karo. Lix ama toddoba sannadood oo kale ayaan rajaynayaa inaan heerkayga ugu sarreeya u ciyaaro.”
Jordan Henderson oo uu tusaale u yahay saaxiibkiisa Anfield ee James Milner oo isagoo ay da’diisu madaxa la gelayso 36 jir haddana heerka ugu sarreeya wali kusii sugan, ayaa uu doonayaa inuu soo qabto, laakiin waxa ka horreysa shaqo badan iyo inuu jidh ahaan taam u ahaado.